VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ bụ a na-ewu ewu software na desktọọpụ nyiwe. Ị maara na ọ bụ dị na gị Android ekwentị kwa? Na-amụba ojiji nke smartphones, VLC ugbu a awade ha na-ewu ewu media ọkpụkpọ na Android. Ọ bụrụ na ị na-amaghị nke software ebe a ihe ise ị ga-mara banyere VLC maka android.
Part 1: ise pụrụ ịdabere download isi mmalite
Part 2: Olee otú tinye ndepụta okwu na VLC android?
Part 3: VLC si ewu ewu mgbasa ozi ọkpụkpọ ga-adịghị anya na-akwado Chromecast
Part 4: otú melite a Playlist na VLC android
Part 5: otú iji VLC maka Android TV
VLC otu nke ukwuu ebudatara ngwa ọdịnala na android na ọ bụ dị iche iche weebụsaịtị na ahịa ma ọ bụrụ na ị chọrọ ibudata ngwa. Ebe a na-ise pụrụ ịdabere na isi iyi nke VLC.
Otú ọ dị, ihe nile nke na isi mmalite ga-ewe gị ka Google Play maka download na nwụnye.
Part 2: Olee ịgbakwunye ndepụta okwu na VLC android?
Ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya na-agba ọsọ VLC na desktop, ị na-eleghị anya na-eji ndepụta okwu. VLC, dị ka ya na desktọọpụ version, na-akwado ndepụta okwu na gam akporo igwe dị ka mma. Ị nwere ike tinye ndepụta okwu na ala. Naanị ihe chọrọ bụ kwesịrị ekwesị sobtaitel faịlụ. Mgbe ị na-akpọ video dị nnọọ enweta na abụọ akara ngosi nke na-enye gị Họrọ sobtaitel faịlụ. Chọgharịa site na ekwentị gị maka sobtaitel faịlụ na ọ ga-kwukwara na video. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ọ na-ama agbakwunyere ọ ga-abụ na-akpaghị aka. ahụrụ site VLC. Ị nwere ike ịgbanwe sobtaitel ederede site ntọala.
Nkebi nke 3: VLC si ewu ewu mgbasa ozi ọkpụkpọ ga-adịghị anya na-akwado Chromecast
VLC ka a mara ọkwa na ọ ga-tinye Chromecast na ya na-esote update. Chromecast ji nwayọọ nwayọọ na-aghọ otu n'ime ndị isi ọhụrụ. Chromecast agbanwe ụzọ anyị na-ekiri telivishọn dị ka ọ na-ejikọ anyị smartphones na ngwaọrụ ndị ọzọ na netwọk gị. Ị nwere ike ugbu enuba ọdịyo na video kpọmkwem site ngwa gị TV. Chromecast na-enye ohere na-akpọ vidiyo si na Netflix na YouTube ma ọ dịghị mfe enuba vidio ndị na-na ngwaọrụ. Ugbu a Chromecast ga-ekwe ka nkwanye videos na audios iji VLC.
Nkebi nke 4: otú melite a Playlist na VLC android
Mgbe songs na-egwuri na VLC android ị nwere ike ịzọpụta playlist na aha-amasị gị ndị a listi ọkpụkpọ dị maka ị ịnweta site na playlist edemede. Ị nwere ike idezi egwu ọkpụkpọ site na aka wepụ songs na-agbanwe ha kwụ n'ahịrị ọnọdụ site nanị na ịdọkpụrụ ha na ala. I nwekwara ike ihichapụ ma ọ bụ jikwaa, dị ka ị na-amasị na ekwentị gị.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ile video na gị android tv na na netwọk. Ị nwere ike mgbe niile-enuba site na itinye netwọk adreesị. Dị nnọọ aka na n'elu aka ekpe akuku. A ga-enwe ọtụtụ nhọrọ gụnyere iyi. Dị nnọọ enweta na iyi na tinye adreesị nke ngwaọrụ ke netwọk. Nkeji ole na ole, ị ga-enwe ike na-ekiri ndị iyi.
Olee otú Download ngwa site Google Play
> Resource> Android> ihe ise na-Maara Banyere VLC si Android Player